စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၁ ) ( ကား ပါမစ် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၁ ) ( ကား ပါမစ် )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၁ ) ( ကား ပါမစ် )
Posted by Foreign Resident on May 8, 2012 in Think Different | 15 comments
အင်း ဒီ Post ကတော့
” ster ” ရေးထားတဲ့
” ကားတင်သွင်းခွင့် ”
ဆိုတဲ့ Post ကို ဝင်မန့်ရင်း ရှည်သွားလို့ ။
Post တစ်ခု သတ်သတ် လုပ်လိုက်ရတာပါ ။
” ကားတင်သွင်းခွင့်(ပါမစ်)ကို.. ဘာအကန့်အသတ်မှမထားပဲ.. ပေးသွင်းသင့်ပါတယ် “
ငါးနှစ် ရှေ့ပိုင်း ( eg ; ၂၀၀၇ ) ဆိုတာမျိုးလေးတွေတော့ ထားသင့်ပါတယ် ။
နို့မို့ရင် ကျုပ်တို့နိုင်ငံ မလဲ ဂျပန်ရဲ့ ကားသချိုင်းကြီးကိုဖြစ်လို့ ။
သူများနိုင်ငံက သူများသုံးပြီးသားအကျ ကားအဟောင်းကြီး တွေကို ၊
ဒီနိုင်ငံမှာ သူဌေးလုပ်ပြီး စီးနေရတာနှင့်တင် စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ ။
ကား မေါ်ဒါယ်တွေ သိပ်ဟောင်းလွန်းတော့လည်း ၊
Generally ပေါ့ လုံခြုံရေး အဆင့်မမှီယုံတင်မကဘူး ၊
သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်လည်း ထိခိုက်တယ်ဗျ ။
၂၀၀၇ မော်ဒယ်အထက် ၁၃၀၀ စီစီအောက် အိမ်စီးကားသေးတွေပဲ သွင်းခွင့်ရမှာပါ “
Eleven News ထဲမှာတော့
” နိုင်ငံခြားငွေ Account ဖွင့်ထားသူတိုင်း ၂၀၀၇ မော်ဒယ်အထက် ကားများ
လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်းခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း “
လို့ရေးထားတယ်ဗျ ။ ၁၃၀၀ စီစီအောက် အိမ်စီးကားသေး လို့ မပါဘူးနော် ။
အဲဒီအချက် အရေးကြီးတယ်ဗျ ။
နောက်တစ်ခုက ၂၀၀၇ အထက်ဆို အခွန် တော်တော်များတယ် ။
စုစုပေါင်း ၁၆၅ % လားမသိဘူး ။ အဲဒါကိုရော မလျော့ပေးတော့ဘူးလား ။
ကြားတာကတော့ အခွန်ကို တစ်ဆင့်ခြင်း ညှစ်ယူနေတာပါတဲ့ ။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ အာဆီယံ AFTA စည်းမျဉ်းတွေကို စပြီး လိုက်နာရတော့မှာပါ ။
အဲဒီအခါကြရင် ၊ ကားပါမစ် ဆိုတာ မရှိတော့တဲ့ အပြင် ၊
အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စုစုပေါင်း အခွန် ၁၆၅ % ဆိုတာကိုလည်း ၊
၅ % ကိုလျှော့ပေးရတော့မှာပါ ။
အဲဒီတော့ လောလောဆယ် မြန်မာပြည်ထဲမှာ ငွေပိုငွေလျှံလေး ရှိနေတဲ့သူတွေကို ၊
၂၀၁၅ မတိုင်မှီလေးမှာ ကားတွေ စုပြုံသွင်းခိုင်းထားပြီး ၊
အခွန်လေးတွေကိုလည်း ၁၆၅ % နှင့် ဆောင်ခိုင်းထားတာပါ ။
Hand Phone တွေကို ၁၅ သိန်း ဈေး နှင့် ၁၅ သိန်း ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ
မြန်မာပြည်မှာ ကုန်လောက်တဲ့ အထိရောင်းတယ် ။
၁၅ သိန်း ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ ကုန်ပြီလား ။
လာမယ်လေ ၊ ၅ သိန်း အထိလျော့ချပြီး ၊
၅ သိန်း ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ မကုန်မချင်း ညှစ်ရောင်းတယ် ။
၅ သိန်း ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ ကုန်သလောက်ရှိသွားပြီလား ၊
ဒါဆို ၂ သိန်း ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ ကို ဆက်ရောင်းပေးမယ် ။
၂ သိန်း ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ ကော ကုန်သွားပြီလား ။
ဟဲ ဟဲ ၊ ၁ သိန်း ကို လျော့ပေးမှာပေါ့ကွယ် ။
အဘ အစိုးရကို အပြစ် မဆိုပါဘူးကွယ် ၊
သူတို့မှာလည်း ဘတ်ဂျက် လိုငွေတွေ အရမ်းပြနေတာကိုး ။
ဒီလိုပဲ လုပ်ရမှာပေါ့လေ ။
အခုချက်ချင်း ကားသွင်းပြီး စုစုပေါင်း အခွန် ကို ၁၆၅ % နှင့်
ဝမ်းပမ်းတစ်သာ ဆောင်ချင်ကြသူများကိုလည်း အားပေးပါတယ်ကွယ် ။
နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက် တစ်တပ်တစ်အား အခွန်ဆောင်ပေးကြတာပဲ ။
အားပေး ချီးမြှောက်သင့်တာပေါ့ ။
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၅ ကျရင် AFTA စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာရတဲ့အခါ ၊
ကားတင်သွင်းခွန်ကို ၅ % ပဲဆောင်ရတော့မှာမို့ ၊
ကားဈေးတွေ အခုထက်ကို ထပ်ကျဖို့ ရှိနေတယ် ဆိုတာလေး သိထားရင် ပြီးတာပါပဲ ။
မှတ်ချက် ။ ။ အဘ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ အခွန် ၁၆၅ % ၊ ၅ % ဆိုတာတွေက
သင်္ဘောပေါ်ကနေ ရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် မေးရမယ့် လူမရှိတော့ သိပ်မတိကျနိုင်ပါ ။
AFTA ဝင်ရင် ၅ % ကိုလျော့ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောလေးကိုပဲ ပြောချင်တာပါ ။
အောင်မယ်လေးအဘရယ်။ ၆၀ ကပိတ်သွားမှဖြစ်သွားတာပါ။ ပိတ်ပိတ်ချင်းနေ့ခင်းကဆို ၈၅ ထိတက်သွားတာ။ မပိတ်ခင်က ၂၅ ပဲရှိတယ်။ မသွင်းပဲ ကိုင်ထားတဲ့သူတွေ၊ နောက်ကျ လို့ပိတ်ပြီး မှပါမစ်ကျတဲ့ သူတွေတော့ကိုက်တာပေါ့။ အဲလိုမှန်းသိလျှောက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလဲ ရှိတယ်။ အခုပြန်ဖွင့်ရင်တော့လျှောက်ပြီး မရောင်းပဲကိုင်ထားမယ်။ ပိတ်မှတက်ဈေးရောင်း မယ်စိတ်ကူးတဲ့ သူတွေတော့ အခုအမိန့်အရတော့ သေပီဆြာ ပဲအဘဖောရေ။
ကျုပ်တို့နိုင်ငံ မလဲ ဂျပန်ရဲ့ ကားသချိုင်းကြီးကိုဖြစ်လို့
ဟန်းနီးမွန်း ခရီးမှာ သွေးဆုံးသွားတဲ့ သတို့သမီး လိုပါပဲဗျာ….
တို့ကတော့ ပူကို မပူတာ …
မြန်မာပြည်မှာ အခွန်စနစ် မဖွံ့ဖြိုးဒေါ့ အစိုးမရအဖို့ သယံဇာတတွေ ကုန်ဂျမ်းဇေးနဲ့ ထုတ်ယောင်း၊ လှီးလိုရဒဲ့ ပြည်ဒွင်းစားသုံးသူဒွေဆီဂ ရသလောက်လှီးရဒါပေါ့..။ ကားများဒါဒေါ့ ဟုတ်ပါဘီ.. နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေ ထိန်းဖို့ ဘယ်လို အကြံအစည်ရှိလည်း မသိဘူးနော်..။ လိုင်စင်ဂျေးဒွေ တက်လာနိုင်စရာရှိဒယ်။ ကညနရုံးဂ ဆြာဒွေ ထောဂျအုံးမှာပေါ့…။
ကိုဖေါရင်း နဲ့ ရွာသားတို့ရေ…
မနေ့ကထွက်တဲ့ သတင်းက ၁၃၀၀ စီစီအောက်လို့ပြောပြီး (ပြောတဲ့သူက အစည်းအဝေးတက်တဲ့သူ)
ဒီကနေ့မနက်ကျတော့ စီစီမကန့်သတ်ဘူး လို့ ဖြစ်ပြန်ရော…။ (ပြောတဲ့သူက ပို့ဆောင်ရေးက…တဲ့)
ဒီမနက် မှာတော့ ကားနဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့ ရန်ကုန်သား တသောင်းကျော်လောက် လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်ကုန်ကြသဗျာ..။
အဲဒါကြောင့်ပြောတာ… ဒီနိုင်ငံနေတာ ပျင်းစရာမကောင်းဘူး…
အမြဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေပြည့်နေတာ… :D :D :D
သများတို့တော့ ၂၀၁၅ မှပဲ ၅ % နဲ့ကားဝယ်စီးတော့မယ်။ အဲဒီကျတော့ ပါမစ်လဲမရှိတော့ဘူးကြားတယ်။ ဂျပန်ကကားပေါက်ဈေးနဲ့အခွန် ၅% ပဲပေးရမယ်ဆိုတန်မှတန်။ အဲကျမှစီးတော့မယ်အဘရေ။ အခုလဲမတန်သေးဘူး။ အခွန်ကအဘပြောသလိုများတုန်းပဲ။
တစ်ခုတော့ သတိထားစရာရှိတယ်နော် ။
အဲဒီ ၂၀၁၅ ကျရင် အခွန် က ၅ % ကို ကျော်လို့မရပေမယ့် ၊
သူတို့က က ည န ရဲ့ ကားမှတ်ပုံတင်ကြေးကို ဟိုးထိပ် အထိ ဆွဲတင်လိုက်နိုင်တယ် ။
ဥပမာ စင်္ကာပူမှာ C O E ( Certificate of Entry ထင်တယ် )
( ကားမှတ်ပုံတင်ကြေး နှင့် သဘော တူမယ် )
အဲဒီကြေးက ဒေါ်လာ လေးသောင်းလောက် ရှိတယ် ။
အင်းးး ၊ အဓိက ကတော့ အာဏာပိုင်များ ရဲ့သဘောပါပဲကွယ် ။
ဘယ်တတ်နိုင်မလည်း ၊ ရှင်တို့က ရဲတွေကိုး ။ ဆိုသလိုပေါ့လေ ။
ငွေကြေးအရှုံးအမြတ်တွေပါတွဲပါလို့ နှလုံးရောဂါရှိသူဆို ဘိုင်းကနဲလဲသေလောက်ပါရဲ့…
ဒီနေ.တော. စလစ်ဈေးတွေ ထိုးဆင်းကုန်ပြီ။ သိန်း(၁၁၀) နဲ.ရောင်းတာ အ၀ယ်မရှိဘူး။
ပါပစ်မလိုပဲတင်သွင်းခွင့်ပေးလို့ကြိုဆိုပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ကားများလို့လမ်းတွေပိတ်တာကိုတော့ မလိုလားဘူး။ ဂုံးကျော်တံတား တွေမပြီးခင် စွတ်သွင်းပြီးစီးကြလို့ လမ်းတွေပိတ်ပြီး ရုံးသွားနောက်ကျမှာ ကိုတော့ဆိုးရိမ်မိတယ်ဗျာ။ ကိုတွေကလိုင်းကားစီးတဲ့သူတွေလေ (ပါမစ်မလိုဘူးဆိုလဲ အခွန်တွေ အကြေးတွေ ကများတော့ မစီးနိုင်ပါဘူး :-) )။ အခုကားဟောင်းဖျက်သိမ်း တာနဲ့တင်တော်တော် ပိတ်နေပြီ။ အဲ့ဂုံးကျော်တံတား တွေကလဲ ၄ လနဲ့ အပြီးဆောက်မယ် ပြောပြီး အခုတော့ မြေပေါ်မှာ ခဲခြစ်တာနဲ့တင် ၄လ ကျော်သွားပြီထင်တယ်။ လမ်းတွေပိတ်မယ့်အရေးလဲ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ဗျာ။
တင်သွင်းမယ်. အစီးရေ ကန်.သတ်ချက်ကို ကြိုတင်ပြီးသေသေချာချာ စဉ်းစားသင်.နေပါပြီ။ ဂုံးကျော်တွေ လုပ်ရုံနဲ. ပြီးသွားမယ် မထင်ဘူး။ ဒီ ပွိုင်.ကျော်သွားရင် နောက်ပွိုင်.သွားပိတ်မှာပေါ.။ ဘုရင်.နောင်ဂုံးကျော်တံတားကတော. ရုံးခန်းဆောက်ပြီး လေ.လာတုန်း အဆင်.ပဲ ရှိသေးတယ်နဲ.တူတယ်။ မိုးတောင်ကျတော.မယ်။ တခြားတိုးတက်မှု.တော. မတွေ.သေးဘူး။ လမ်းတွေကတော. တော်တော်ပိတ်နေပြီ။
လမ်းတွေကိုတော့ သေချာလုပ်မယ်မစိတ်ကူးဘူး။ နောက်လုပ်မယ့် ဘုရင့်နောင်တံတား အသစ်ကလဲပြီးသွားပြီ ဆိုင်းပုဒ်လေ :-)။ (ဘုရင့်နောင်တံတား တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းနေရာ ဆိုပြီး ထောင်ထားတယ်)။
ကားကြပ်တဲ့ကိတ်စကတော့ လမ်းချဲ့၊ တံတားထိုးရုံနဲ့မရပါဘူး။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးချောမွေ့ ဖို့ ချောင်ချိဖို့ဆိုရင် မြို့ပါတ်ရထားကိုအဆင့်မြှင့်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘတ်စ်ကား တစီး မှာလူ ၅၀ ပဲပါနိုင်ရင်၊ ရထားဆိုလူထောင်ချီပြီးပါသွားတာမို့ ဘတ်စ်ကားတွေလဲ မှတ်တိုင် မှာကျောက် ချတာတို့ ပြိုင်မောင်းတာတို့ လမ်းပိတ်ရပ်တာတို့ နဲသွားမယ်ဆိုရင် လမ်းကလဲ အလိုလို ပွင့်သွားပြီး ကားတွေကဂျမ်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။